Mhete Uye Mhete Kuunganidzwa kweMouvant kwakafuridzirwa nezvimwe zvinhu zveFururism, senge pfungwa dzesimba uye kugadzirwa kwezvinhu zvakasarudzika zvakasarudzika zvakaburitswa nemutambi weItaly Umberto Boccioni. Mhete uye chindori cheMouential Collection chinoratidza zvidimbu zvakati zvegoridhe zvehukuru hwakasiyana, dzakashongedzwa nenzira yakadaro iyo inozadzisa kunyepedzera kwekufamba uye inogadzira akawanda akasiyana maumbirwo, zvichienderana nekona yekuti inoonekwa.
China 17 Chikumi 2021
Rin'i Nyika yakasikwa inogara ichifamba sezvo ichienzanisa pakati pekurongeka uye nyonganiso. Dhizaini yakanaka inogadzirwa kubva kune imwechete tension. Hunhu hwayo hwesimba, runako uye simba zvinobva kubva mukugona kwemhizha kuramba wakavhurika kune izvi zvinopesana panguva yechiitiko. Chidimbu chakapedzwa huwandu hwesarudzo dzisingaverengeki dzinogadzirwa nemugadziri. Kufunga kwese uye kusanzwirwa kuchaguma nebasa rakasimba uye rinotonhora, nepo kunzwa kwese uye pasina kudzora kunobereka basa rinotadza kuzviratidza. Kupindirana kwevaviri ichi chichava chiratidzo chekutamba kwehupenyu pachahwo.
Chipfeko Kana iwo mwenje uchipinda nepahwindo uine mwero wakajeka, unoburitsa chiyero chekunaka, kuvhenekerwa kuunza vanhu mumba umo zvisinganzwisisike uye kunyaradza pfungwa, seya Nyx neisinganzwisisike uye yakanyarara, kushandiswa kwemachira akaremerwa uye kusendama kudzamisa dudziro yakadai yerunako.
Chipiri 15 Chikumi 2021
Lavazza Desea Kofi Muchina Chishanu 30 Chikunguru
Quaint and Quirky Cafe Yemukati Dhizaini China 29 Chikunguru
Aoxin Holiday Hotera Chitatu 28 Chikunguru
Mhete Uye Mhete Rin'i Chipfeko Mutsipa Zvishongo-Mhete Shangu Dzakasarudzika